Qaababka Cusub ee Warbixinta CEP-ga ee Sarah Lovan
By Sarah Lovan
Qoraalkan soo socda ayaa ah wareysi lala yeeshay sarkaalka barnaamijka farshaxanka Sarah Lovan oo ka yimid warbixinta cusub ee CEP Cilaaqaadka Walxaha. Sarah waxay ka mid tahay saraakiisha barnaamijyada aadka loo qiimeeyo ee CEP-da ee Digniinta Dareenada Dakhliga.
CEP: Khibradahee ayaa qaabeeyay falsafaddaada muhiimada ay leedahay xidhiidhada jagada shaqaaleynta?
Sarah Lovan: Waxaan tegay safar lala galo Sanduuqa Dadka Reer Banaadir oo labadaba la ixtiraamo, waxaanay sharaf u tahay in aan si qoto dheer uga barto dhaqanka hooyo iyo qaabka loo xoojiyo dhaqamada aan ahayn aniga. Waxa kale oo aan ogaaday siyaabaha aan u aqoonsado haween caddaan ah (white woman) inay gasho xaalad iyo sida aan u baahanahay in aan wax ka beddelo habka aan u shaqeeyo ama wadahadal u yeesho si aan u ixtiraamo dhaqanka qof kale markaan soo dhawaado, ama aan soo dhawaado, bulshooyinka la xiriira maalgelinta. Waxa kale oo aan ku maray nidaam Alexs Pate-isagu waa qof cajiib ah, barbaariye, iyo qoraa. Wuxuu qoray Amistad. Waxa uu sameeyay nidaam kooxdayda nala soo wacay Masruuf aan la bixin. Waxay ku salaysan tahay wax uu ku sameeyay fasalada leh macalimiinta iyo ardayda, waxaana uu abuuray manhaj loogu talagalay deeqsinimada. Taas ayaana dhab ahaantii fahamtay fahamka sida aan u sii wanaajin karo shaqadan - kaliya oo la fahmayo sida aan u muuqan karo ama sida aan u arko ama sida aan u muujiyo marka aan ku dhex socdo qol. Waxaan matalayaa aasaas weyn. Waxaan ka mahadcelinayaa barashada dadka kale sidii ay u noqon lahaayeen kuwo sax ah oo la ogaado meesha deeq bixiyayaashu ay yihiin markaad wadahadal la yeelaneyso oo aad ixtiraamayso awooddaas.
"Ma jiraan dhab ah meel bannaan oo maskaxdayda, aasaas u ah in aan u sheego hay'ad waxa la sameeyo. Ma'aha faa'iido fiican in habka loo qoro. Waxaa laga yaabaa inaan hayo aragti, waayo-aragnimo, iyo fikrado aan la wadaagi karo urur, laakiin waxaan u maleynayaa inaan ogahay waxa ugu wanaagsan ee ay u leeyihiin inay mudnaanta qaataan maahan arrin. "
- SARAH LOVAN, BARNAAMIJKA BARNAAMIJKA ARTS
CEP: Maxaad ka baratay intaad ku jirtay sarkaalka barnaamijka ee bedelay habka aad xiriirka ula sameysid deeq bixiyayaasha?
Sarah Lovan: Waxaan bartay in badankeennu isku dayeyno inaanu samayno wax aan ku habbooneyno inaanu ku sii noolaano. Waxaan isku dayaa in aan mar walba la socdo maanka furan iyo wadnaha furan. Oo dhegayso. Waxaan ka fekerayaa meesha ay dadku yihiin iyo waxa ay isku dayayaan in ay gutaan, oo run ahaantii u sharfaan iyaga iyo dadaalkooda. Si daacadnimo ah, taasi waa waxa aan bartay. Waxaan kale oo aan bartey in aan u baahanahay, ee booskan, si aan u fahmo jinsiga iyo dhaqanka si qoto dheer. Waxaan u baahanahay inaan akhristo buugaagta oo kaliya, waxaan u baahanahay inaan xiriir la yeesho dadka aanan i jecleyn, kuwaas oo aanan aniga aniga iila mid aheyn, oo aan ku dhaqmin waxyaabo isku mid ah oo aan ku dhaqmo, iyo inaan raadiyo kaliya xiriiradaas, laakiin horumariyaan. Shaqada noocan ah waa lagama maarmaanka u ah aasaaska oo sii wadaya isku xirnaanta xiriirka habdhaqan dhab ah iyo samaynta deeq-lacageed fiican oo wanaagsan, dhab ahaantii. Kaalinta xoogan waa markaad dhageysato oo aad ku dhaqanto aqoonta iyo wadaagista dadka aad isku dayeyso inaad ku xirto.
Sarah Lovan ayaa lagu soo bandhigay Mawduucyada Xidhiidhka CEP: Saraakiisha Barnaamijka, Deeqaha, iyo Furaha Hawlgallada warbixinta.